Grace Mugabe: Angila Sifiso Sokuba Ngumongameli
UDr Amai Grace Mugabe igama abambiza ngalo kuZanu PF
Umkamongameli, unkosikazi Grace Mugabe uqhubeka elandula imibiko ephuma kumaphephandaba, ethi angabe efuna ukuba ngumongameli, esithi akala leso sifiso ngoba ivele ikhona inkokheli, enjengomsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa amchaze njengomngane wemhuli yakhe njalo emhlonipha okwamagama.
Uzulu wamukele umkamongameli unkosikai Grace Mugabe ngenjabulo endaweni yemabhizimusi yeMataga, eMberengwa esigabeni seMidlands.
Unkosikazi Mugabe ukhumbuze abantu beMataga kanye lenkokheli yeZanu PF ukuba ingaziyengi kulabo abafuna izikhundla zaphezulu, becabanga ukuba kuzaba lenguquko emhlanganweni ozakwenzelwa eVictoria Falls we Conference, ngoba ungasi wokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli.
Wengeza ethi usebenza labasekeli bakamongameli sikhathi ngoba kumele enze njalo njengomkhokheli wohlangothi lwabesifazane lwe Zanu Pf hatshi lokho okucatshangwa ngabanye ukuba ufuna ukuba ngumongameli.
Wembe phansi umka mongameli ukuba akayi kulibusa leli lizwe umnumzana Morgan Tsvangirayi, okhokhela ibandla leMDC-T njengoba umkakhe umongameli Robert Mugabe kunguye kuphela owakhethwa nguNkulunkulu ukuba abuse eleZimbabwe.
Uthuke owake waba yisikhulumeli sebandla leZanu Pf, umnumzana Rugare Gumbo, odabuka esigabeni seMidlands lapha akade ekhona, embeka umlandu wokuba ngumthengisi, ethi wahlamukela ibandla njalo engumthengisi njengalokho ayevele ekwenza kusukela ngesikhathi kulwiwa impi yenkululeko, ilizwe lingakatholi uzibuse.
Beze bobabili lamuhla, ukuzangena lumhlangano, abasekeli bakamongameli bobabili, omnumzana Emmerson Mungagwa lo Phelekezela Mphoko.
UMphoko onguye owethule unkosikazi Mugabe emhlanganweni, uqale ngenkulumo yakhe yokuxwayisa abasebandleni lakhe abalenkethabetshabi ukuthi batshiyane lakho.
Wethukile uzulu kancinyane lapho omunye wabasekeli bakamongameli uMnangagwa ephosise kancinyane ekwenzeni i slogan ethi “Pasi ne Za, ah sorry,pasi ne MDC”.
Ubekhatshwe yindodana yakhe umnumzana Russel Goreraza owabele izalukazi ukudla lesepa njengalokho akwenze emhlanganweni weMbare ngo.
Umka Mongameli wenze asejwayele ukukwenza sikhathi sonke nxa ethe wethekelela izigaba emihlanganweni yakhe ayiqhubayo elizweni, ukwabela uzulu we Mataga impahla ebalisa amatractor, ukudla, isepa yokuwatsha, amafutha wokuphekisa, i-rice lezigqoko ezindala.
Uphethe inkulumo yakhe unkosikazi Mugabe ngukucula ingoma yokholo eyahlatshelwa ngumhlabeleli ogama lakhe ngu Takesure Zama.